Dagaal ba’an oo u dhexeeya Mujaahiddiinta Iyo Cadawga Madoow oo ka Qarxay haatan Agagaarka Madaxtooyada!! | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Dagaal ba’an oo u dhexeeya Mujaahiddiinta Iyo Cadawga Madoow oo ka Qarxay haatan Agagaarka Madaxtooyada!!	Seteembar 29, 2008
War Deg-Deg ah:- Muqdisho,29,Sept,2008,Isniin,(Hillaac.net) Dagaal aad u culus oo u dhexeeya Mujaahiddiinta soomaaliyeed iyo Cadawga Wejiyada badan ee isla socda ayaa goor dhaw ka qarxay qeybo ka mid ah Caasimadda Muqdisho gaar ahaan Wardhiigleey, Xararyaale, Iyo Aagag kale oo ku dhaw-dhaw Madaxtooyada.
Dagaalka oo la’isku adeegsanayo Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ah mid Kuleylkii uu ku billowday weli soconaya Iyadoo Madaafiic aad u Cul-culus oo ay Adeegsanayaan Cadawga wada socda ay ku soo dhacayaan Xaafado ka tirsan Magaalada Muqdisho oo uusan Dagaal ka socon.
Weli si Buuxda looma oga Qasaaraha ay geysteen madaafiicda ay Cadawgu ku garaacayaan Xaafadaha Muqdisho Iyo Qasaaraha soo gaaray Cadawga Maadaama Dagaalku uu si kulul weli uga socdo aagaggii uu ka billowday isku socodkii Dadka iyo Gaadiidkuna uu gebi’ahaanba hal mar istaagay.
Wixii war ah oo naga soo gaara Dagaalka Dib baan idin kala socodsiin doonnaa Haddii alle idmo.